Home Wararka (Akhriso) Shaqaalihii Madaxtooyada oo weli ku jira Guddiyada Doorashada
(Akhriso) Shaqaalihii Madaxtooyada oo weli ku jira Guddiyada Doorashada
Waxaa soo baxday faragelin ay la kulmeen Guddiga Wasiirada ee Ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble u saaray kala shaandheynta xubnaha Guddiyada Doorashada ee cabashada laga keenay oo sababtay inay weli Guddiyada ku jiraan xubno ka mida shaqaalaha dowladda.
Guddigan oo uu madax u yahay Wasiirka Waxbarashada C/llaahi Carab oo saaxiib dhow la ah Ra’iisal wasaaraha ayaa la sheegay inay faragelin uga timid Madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Agaasimaha NISA, kadibna ay u hoggaansameen inay guddiga ku sii hayaan xubno ka mida shaqaalaha dowladda.
Siyaasiyiinta kasoo jeeda Somaliland ee Garabka Guddoomiyaha Aqalka Sare ayaa maanta shaaciyey inuu weli guddiga Doorashada Somaliland ku jiro Khadar Xariir Xuseen oo Farmaajo doonayo inuu noqdo Guddoomiyaha Guddiga Doorashada Somaliland.
Khadar xariir wuxuu ka tirsan yahay Mas’uuliyiinta Sare ee Hay;adda Qaxootiga Qaranka, isagoo markii hore ka mid ahaa shaqaalaha Madaxtooyada, balse loo wareejiyay Hay’adda Qaxootiga markii ay madax ka noqotay agaasimihii hore ee Madaxtooyda Aamina Siciid Cali.
Xubinta kale waxaa lagu magaaabaa Yoonis Xasan Alifow wuxuu ka mid yahay Guddiga Doorashada Hirshabellem isagoo ahaa guddoomiye ku xigeenka Hay’adda Qaxootiga Qaranka, waxaana labadan xubnood dacwad kasoo gudbiyey Midowga musharaxiinta iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi C/llaahi.
Previous articleFarmaajo oo markale lagu eedeeyay Faragelinta Doorashada
Next articleCulumada Puntland oo ka hortimid Xeerka Gudniinka Haweenka
Cadaala oo sheegay inaan RW Rooble xoog iyo cagajuglayn wax looga...